Hooyo jaamacad ka qalinjebisay iyadoo u babac-dhigtay cadaadiska seygeeda - Radio Ergo
Hooyo jaamacad ka qalinjebisay iyadoo u babac-dhigtay cadaadiska seygeeda
Muna Maxamed, oo ah hooyada lix carruur ah oo ku faraxsan inay ka qalinjebisay jaamacadda/Ergo
(ERGO) – Muna Maxamed Xasan oo ah hooyo haysata lix carruur ah, ayaa 14-kii September ka qallin-jebisay jaamacad ku taalla Somaliland, iyadoo ka qaadatay shahaadada caafimaadka bulshada, inkastoo seygeeda iyo qoyskeedu ay ka soo horjeedeen hamigeeda waxbarasho.
“Labo kala dooro ayaa la i yiri; inaad jamaacaddaada dhigato iyo inaad gurigaaga joogto,” ayay tiri.
“Waad iska garaneysaa odayaasha Soomaalida inta badan ninka ayay iska raacaan marka ay wax kala dhex-dhexaadinayaan. Odayaashii ayaa kulmay oo waxay soo go’aamiyeen inaan ninkeyga addeeco. Ninka intaan u tagay ayaan ku iri ‘warqaddeyda i sii’, maaddaama ay iga go’neyd inaan wax barto.”
Muna oo 32 jir ah ayaa jaamacadda Tima-Cadde xarunteeda magaalada Gebiley ku billowday $220 oo ay ka soo deynsatay gabar ay qaraabo yihiin sanadkii 2015-kii.
Waxay tilmaantay in markii ay go’aankeeda ku adkeysatay ay odayaasha ka codsadeen ninkeeda inuu waxbarashada isaga dhaafo. Hase yeeshee, ninkeeda ayaa billaabay inuu biilka ku cadaadiyo, wuxuuna ka goostay lacagihii dheeraadka ahaa ee uu siin jiray, si ay uga soo noqoto go’aankeeda waxbarasho.
Muna ayaa warqad u qoratay maamulka dowladda hoose ee magaalada Gebiley dhammaadkii simistarkeedii koowaad, waxayna ka codsatay deeq-waxbarasho. Waxay ka mid ahayd shan arday oo la siiyay deeqda oo soconeysay intii uga dhinneyd waxbarashada.
Haweeneydaan ayaa markii ay jaamacadda ku biireysay ahayd hooyada saddex carruur ah. Balse tirada carruurteeda ayaa korortay intii ay jaamacadda dhiganeysay, taasina waxay dhalisay in labo sano ay ka dambeyso ardaydii ay jaamacadda isla billaabeen, maaddaama ay fasax ka qaadaneysay waxbarashada waqtiyadii ay umusha ahayd.
“Ilmahaygii afaraad ayaan uurkooda lahaa markii aan jaamacadda ku biirayay. Fasax ayaan ka qaadan jiray jaamacadda inta aan umusha ku jiro. Mararka qaar xiisadii oo socoto ayaan bartamaha uga bixi jiray si aan guriga u aado oo aan u soo nuujiyo ilmahayga,” ayay tiri.
Muna ayaa xustay in carruurteed ay uga tagi jirtay gabar ay qaraabo yihiin oo ay reerkooda ka soo wadatay.
Waxay Raadiyow Ergo u sheegtay inay ku faraxsan tahay guusha ay waxbarashada ka gaartay, taasi oo aysan gaarteen haddii ay addeeci laheyd warka ninkeeda iyo kan odayaasha.
“Dadkii waxay i waydinayeen, maxaa kaa maqan? Sow reer iyo carruur kuguma xiriiraan? Balse, aniga way ila xumaatay inaan guriga iska fadhiyo aniga oo waxbarashadeyda wadan kara oo dugsi sare ka soo baxay,” ayay tiri.
Muna ayaa kula talisay haweenka Soomaaliyeed inay waxbartaan oo aqoontooda ay kororsadaan intii ay guri iska fadhin lahaayeen. Waxay xustay in hooyadu ay tahay macallimadda ugu horreysa ee carruurteeda sidaa awgeedna ay waxbaristeedu u dhiganto in bulshada oo dhan ay waxbaratay.
“Maanta, waan ogaan karaa jirrada carruurtayda oo waxaan u iibsan karaa dawada ku habboon. Sidoo kale shaqo ayaan codsan karaa maaddaama aan shahaado heysto oo waxaan noqon karaa naag madax-bannaan,” ayey tiri.
Waxay sheegtay in seygeeda iyo qoyska oo dhan ay kala qeyb qaateen xafladdeeda qalin-jebinta oo ay ku farxeen guusha ay ka gaartay waxbarashada.
Muna ayaa hadda shaqo-raadis ah, waxayna raadineysaa shaqo la xiriirta caafimaadka.
Raadiyow Ergo ayaa la xiriirtay seyga Muna, Mustafa Xaashi Muxumed, oo sheegay in uu aad ugu farxay uuna ka qeyb qaatay qalin-jebinta xaaskiisa.
“Waan ku faraxsanahay. Waxay ahayd safar dheer, laakiin aakhirkii way qallinjabisay. Waxbarashadeedu wax weyn bey noo tahay oo xitaa waxay naga caawin kartaa dhanka dhaqaalaha marka ay shaqo billowdo,” ayuu yiri Mustafa.
Dadka naafada ah oo ka cabanaya in takoor dartiis loogu diido shaqooyin ay qaban karaan